सडकबत्तीको सोलार प्रबिधी
२०७४ भदौ २९ बिहिबार गते ०७:४७ मा प्रकाशित
साविक इलाम नगरपालिका क्षेत्रको घना बजार एरिया भनेको साविककै वडा नं. १ र २ थिए । वडा नं. ३, ६ र ७ मा राजमार्गको पायकमा गाउँले तरिककाका केही पसलहरु बाहेक नगरबस्ती भएका गाउँ थिए जहाँ नागरिकहरुको मुख्य पेशा कृषि नै रहिआएको पाइन्छ । हाल इलाम नगरपालिकामा अरु ६ वटा गाबिसहरु गाभिएका छन् । बर्बोटेको बिब्ल्याँटे र साँखेजुङको नेपालटारमा बजारका केही लक्षणहरु देखिन थालेका छन् । गोदकको घट्टा र जौबारीमा कृषि उपजको सामान्य ब्यापार हुने गरेको छ अन्यथा इलाम नगरपालिकलाई ठूलोगाउँले सम्बोधन गरे हुने देखिन्छ । नगरपालिकाको सीमा निर्धारण गर्दा तोकिएका मापदण्डहरु सबै पालना भएनन् भन्नुको त अहिले कुनै अर्थ छैन तर यातायात, बिद्युत, खानेपानी, जनताको रोजगारी, बाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुबिधा, सञ्चार, आबास, बिद्युत आदि पूर्वाधारहरु यस नगरले कति हासिल गरेको छ गहिरिएर हेर्दामा सन्तोष लिन सकिने अवस्था छैन । हाल गाभिएका गाबिसहरु मध्ये शान्तिडाँडा र सोयाकलाई मेची मार्गले समेत नछोएकोले यी ठाउँलाई नगरको रुप दिन निकै समयलाग्ने निश्चित छ भने अन्यत्र बसोबास गर्ने नागरिकले कतिपय ठाउँमा बत्ती बाल्न पाएका छैनन् र कच्ची सडकबाटो भेट्न धण्टौं पैदल हिड्नु पर्ने बाध्यता छ । बिजुली र सदाबहार सडक पुगेमा मात्र पनि नगरको प्रारुप देखिने कुरामा नगरपालिका पनि विश्वस्त हुनुपर्ने देखिन्छ ।
साबिक इलाम नगरपालिकाको बजार क्षेत्र र पिच भैसकेका सडक किनारामा स्टील पोलहरुमा सोलार प्यानल जडान गरी सडक बत्तीको ब्यवस्था गर्ने काम धमाधम भएको देखिदैछ । यो काम शहरी बिकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले गर्दैछ । यस क्षेत्रमा जम्मा २०३ वटा पोलमा सोलार रात्री बत्ती अटोमेटिक सिस्टमबाट चल्ने बताइएको छ । प्रत्येक ५० मिटरको दूरीमा पिच भैसकेका सडक किनारमा यी बत्तीहरु जडान गरिने भनिए पनि केही पोलहरु कच्ची ठाउँमा गाडिएका छन् र गाडिने तयारीमा छन् । कच्ची सडक किनारमा नगाड्नुको कारण पछि सडक वा घर बनाउदा बत्ती सार्नु पर्ने अवस्था नहोस् भन्ने रहेको बुझिएको छ । तर भविष्यको नोक्सानी प्रति बेवास्ता गरेर दवाव र चाकरीको भरमा नीतिगत कुराको उल्लङ्घन कुनै पक्षले नगरोस् ।
नगरपालिकाको कार्यक्रम अनुसार बिस्तार गरिएका सडक बत्तीहरुमा टिकाउपन नदेखिएको र सहज जडान भैनरहेको अवस्थामा यो प्रबिधी प्रभावकारी देखियो । कतिको सस्तो र टिकाउ होला हेर्न बाँकी छ तर ठेक्कावाला कम्पनी सिप्रदी प्रा. लिले पाँच बर्षको वारेण्टी किटान गरेकोले र जडानको ढाँचा हेर्दा कुनै कुराको अतिक्रमण र दुरुपयोग नहुने लक्षण देखिएकाले सडकबत्तीको यो प्रणाली उचित भएको ठहर सकिन्छ । आवश्यक स्थानहरुमा जडान पूरा भएमा नगरपालिकालाई पनि बिद्युत भार कम हुने देखिन्छ । तर यो प्रबिधी नगर क्षेत्रका सबै भागमा कहिले पुग्ला सोचनीय बिषय हो ।
यस कार्यका लागि २ करोड ३३ लाखको टेण्डरमा उक्त मम्पनीले ३० प्रतिशत कम टेण्डरहालेर ठेक्का पाएको बताइएको आधारमा या प्रबिधी जलबिद्युतको तुलनामा निकै निकै सस्तो हुनुपर्छ र एक पटक जडान गरेपछि पाँच बर्ष महसुल मुक्त हुन सकिने देखिन्छ । जलबिद्युत प्रसारण अवरोध हुँदा समेत उपयोगमा कुनै असर नपर्नाले शहर हरेक रात उज्यालो रहनेमा ढुक्क हुन सक्नु पनि ठूलै उपलब्धी हो । यस कम्पनीले स्थानीय समाग्रीको प्रयोग गरेर केही स्थानमा छानाको पानी सङ्कलन गर्ने योजना पनि राखेको बुझिएको छ । बाँसको भाटाको प्रयोगबाट खाडल तयार गरी बिरुवा रोपेर हुर्काउने प्रबिधी पनि नमूनाको रुपमा गरिदिने सुन्नमा आएको छ । स्थानीय सामाग्री र सीपबाट उत्कृष्ट उपलब्धी अनुसरण गर्नाले सुबिधा र रोजगारीको अवसरमा बृद्धि हने छ ।